Ogaden News Agency (ONA) – Xiisad Adag oo Kataagan Gobolka Wollo Ee Dhulka Axmaarada.
Xiisad Adag oo Kataagan Gobolka Wollo Ee Dhulka Axmaarada.
Wararka naga soo gaadhaya Gobolka Wollo ee dhulka Axmaarada ayaa sheegaya xasilooni dara aad ubadan iyo qulqulatooyin baryahan Gobolka Kajira, kuwaas oo saamayn kuyeeshay nolosha dadka shacabka ah.
Sida xogta aan kuhelayno xasilooni darada Gobolka ayaa bilaabatay kadib markii ladilay mas’uul sare oo katirsanaa Jabhada Xoraynta Axmaarada, kaas oo latoogtay xili uu gurigiisa kusugnaa magaalada Wullo.
Mas’uulka daliday oo lagu magacaabi jiray Yaasiin Cali ayaa lasheegayaa in uu kamid ahaa saraakiisha ugu firfircoon Ururka Xoriyad doonka ah ee kadhaq dhaqaaqa Gobolka Axmaarada gaar ahaan Gobolka ay muslimiinta Axmaaradu dagaan ee Wullo.
Sidoo kale waxaa isla Gobolka lagu afduubay xubin katirsan Jabhada Xoraynta Axmaarada oo meel lageeyay aan la ogayn, wuxuuna afduubka ninkan baasiin kusii shubay xaaladii kacsanayd ee Gobolka Wullo baryahan kataagnayd.
Dadka shacabka ah ee kudhaqan Gobolka ayaa lasheegayaa in ay siwayn uga cadhoodeen faldambiyeed yadan soo noqnoqday ee lagu hayo mas’uuliyiinta Jabhada Xoraynta Axmaarada ee Gobolka Wullo kusugan, waxayna shacabku muujiyeen sida ay uga xun yihiin waxa dhacaya.
Gobolka Wullo oo ay dagaan dad Muslimiin ah oo udhashay qoomiyada Axmaarada ayaa tirsada gacan bidixayn aad ubadan iyo cadaadis xoogan oo kaga yimaada maamulada Gobolka Axmaarada Soomara iyo maamulka dowlada dhexe labadaba.